Allgedo.com » 2012 » November » 29
Home » Archive Daily November 29th, 2012
Reuters/Reuters – A Palestinian boy in traditional clothes waves a Palestinain flag during a rally in the West Bank city of Ramallah November 29, 2012. Palestinian President Mahmoud Abbas appealed to the U.N. …more General Assembly to recognize Palestinian statehood by supporting a resolution to upgrade the U.N. observer status of the Palestinian Authority from “entity” to “non-member...
Odayaaha dhaqanka beesha Sade ee Muqdisho ayaa maanta kulan saxaaadeed ay Muqdisho ku qabteen ku cadeeyay mowqifkooda ku wajahan maamul u sameynta gobolada Jubbooyinka (Dhageyso)
Kulan saxaafadeed ay maanta Muqdisho ku qabteen Odayaasha dhaqanka beesha Sade ee ku sugan Muqdisho ayaa waxay si cad ugu sheegeen mowqifkooda ku wajahan qorshe intii muddo ahba socday ee la rabo in maamul loogu sameeyo gobolada Jubbooyinka iyo Gedo. War-saxaafadeedka oo ahaa mid ay kasoo qeyb galeen idaacado isugu jiray maxali iyo kuwo caalami ah, ayay odayaashu ku sheegeen in marxaladaha dhinacyada...
Ra’isul Wasaraha dalka Itoobiya Hailameryam ayaa casho sharaf usameeyay Madaxweynaha dowlada Soomaaliya Xasan Sh Maxamuud. Casho sharaftaas ayaa sidoo kale waxaa ka qeyb galay xubno katirsan golaha wasiirada labada dowlad ee Itoobiya iyo Soomaaliya. Madaxweynaha qaranka Soomaaliya iyo Ra’isul Wasaaraha Itoobiya ayaa sheegay in ay adkeyn doonan xariirka labada dal. Read More →
Tarsan oo ogaday sababta ay usoo laab laabtan dilalka qorshaysan ee Muqdisho
Xili ay sii kordhayaan falalka dilalka ah ee ka dhaca magaalada Muqdisho ayaa waxaa arintaas si adag kaga hdlay gudoomiyaha maamulka dowlada ee gobolka Banaadir. Duqa Magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan) ahna Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda amaan ee Gobolka iyo guud ahaan dadaalada lagu xaqiijinayo horumarinta Magaalada Muqdisho. Tarsan oo...
Isbaarooyinkii yaalay magaalada Muqdisho oo si xoog ah lagu qaaday
Ciidamada dowlada Soomaliya ayaa maalmahaan magaalada Muqdisho ka wada howlgalo lagula dagaalamayo dhamaan isbaarooyinka yaalay degmooyinka gobolka Banaadir halkaasi oo lagu qaadi jiray lacago sharci daro ah. Waxaa saaka Degmada Wadajir laga qaday Afar isbaaro oo lagu qaadi jiray lacago faro badan kuwaasi oo laga cabsi qabay in dhiig uu ku daato qaaditaankooda. Sida ay sheegayaan dadka deegaanka...
Saraakiisha Maamulka Degmada Dhuusomareeb ee Gobolka Galgaduud ayaa codsaday in wax laga qabto haraadiga waxyaabaha qarxa ee ku jira deegaano dhowr ah oo hoos taga degmada Dhuusimareeb. Gudoomiye ku xigeenka Maamulka Degmada Dhuusomareeb ee Ahlu sunna Cabdulaahi Cabdi Nuur oo la hadlay saxaafada ayaa sheegay inay ka cabanayaan waxyaabaha haraadiga ah ee ku jira degmada Dhuusomareeb. Gudoomiye ku xigeen...